Izindaba - ithuluzi lobuhle lobuso be-hydra lihlanza kanjani isikhumba?
ithuluzi lobuhle lobuso be-hydra lihlanza kanjani isikhumba?
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bajwayelene nedivayisi yobuhle be-hydra ebusweni, ithandwa kakhulu manje. Le divayisi yobuhle ingabizwa ngokuthi inkosi yokuhlanza ubuso. Kepha abantu abaningi abaqondi ukuthi kungani ingahlanza isikhumba kahle kangaka? namuhla sizokhuluma ngokuthi ithuluzi lobuso le-hydra lihlanza kanjani isikhumba?
Umshini wobuso we-hydra uyithuluzi lokuxhumana nobuhle elenziwe yisimiso semishini yokulungisa uketshezi. Ukunyakaza okuvuthayo kwekhanda elenziwe nge-elliptical adsorption kufafaza isisombululo sezimonyo, futhi kusheshe kukhangise isikhumba esifile esikhunjeni sesikhumba nokungcola kwezimbotshana. Inhloso enkulu ukusebenzisa ingcindezi engezansi yomshini wamabhamuza amancane ukuhlanganisa ngokuphelele uketshezi lwe-bubble noketshezi lwezakhi nengqimba engaphezulu yesikhumba, futhi kancane kancane usule ukungcola esikhaleni sesikhumba. Yonke inqubo yokusebenza kwamabhamuza amancane isesimweni sokunethezeka, futhi amabhamuza amancane ngemuva nje kokuqeda enza isikhumba sibonakale siguquka futhi sicwebezela.
1. Ngaphambi kokusebenzisa insimbi, udinga ukususa izimonyo futhi uhlanze ubuso bakho. Ubuso obuvame ukufakwa izimonyo buthambekele ekuqongeleleni izinto eziyingozi ezishiywa izimonyo. Ukuhlanzwa kwe-bubble okuncane nakho ukukhipha lezi zinto eziyingozi. Ngakho-ke lesi yisinyathelo okufanele senziwe.
2. Ngemuva kokukhipha izimonyo nokuhlanza isikhumba, kudingeka sisebenzise umongo wokuthambisa we-horny, sinamathele indwangu kakotini ekhaleni, bese siwisa isici sokuthambisa se-horny ekhaleni. Ngalesi sikhathi, singashiya ikhala ngaphandle kwesisekelo sokuthambisa ngokuphelele i-keratin.
3. Okulandelayo, qala insimbi, hlela kwimodi ehlanzekile bese uvula i-eddy yamanje probe. Kusuka ekhaleni kuye endaweni enemibala ezungeze izindebe, iqala ukumunca, bese ihamba kancane iye endaweni emise okwe-T bese ifinyelela kuso sonke isihlathi, kanye nasentabeni yobuso.
4. Ngemuva kokuhlanzwa okujulile kudoti wesikhumba, lapho isikhumba singakwazi ukumunca ingqikithi ngokushesha nangokushesha, sethule ikhambi lezakhi, kusebenze imodi yesingeniso esezingeni eliphansi ukukhuthaza ukumuncwa, nokufinyelela ungqimba lwe-dermis ukufeza ukuhlangana okuphelele kwamabhamuza amancane nesisombululo sezakhamzimba.
5. Ngemuva kokuthi ukwethulwa kwesixazululo sezakhi kuqediwe, lungisa ithuluzi kwimodi yamanje yamanje ukukhomba i-lymphatic, isilevu nezinye izingxenye zobuso, ezingasiza ubuso ukuthi zinciphise ukuvuvukala futhi zibe nomphumela wokuphakamisa nokuqinisa . Ukuphakamisa intamo, okulula ukuyinaka ukuyigcina empilweni yansuku zonke, kuzokwenza isikhumba sakho sibe sihle futhi siqine.
Isikhathi sokuthumela: Mar-23-2021